Nchọgharị nke Cirrus: Salesforce na Gmail Integration | Martech Zone
Nchọpụta Cirrus: Salesforce na Gmail Integration
Saturday, April 5, 2014 Saturday, April 5, 2014 Douglas Karr
Ndị ọrụ ibe Chris Theisen kwuru Cirrus Insight gaa na Facebook dịka ọ ga - enwerịrị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na - eji Ngwa Google maka email na Salesforce dị ka CRM gị. Mgbe m lechara vidiyo na nseta ihuenyo, ahụrụ m ihe kpatara ya!
Akụkụ nke njikọta n'etiti Gmail na Salesforce gụnyere:
Lelee Ozi Azụtaahịa dị na Igbe mbata gị - dika ị mepere email ị ga-ahụ nchịkọta nchịkọta nke ihe ndekọ nke onye na-ezipụ na Salesforce, gụnyere nchịkọta nke oghere na oghere mepere emepe na nke emechiri emechi.
Zọpụta ozi ịntanetị & Mgbakwụnye na Salesforce - na-akpaghị aka na-akọ ozi ịntanetị ịkpọtụrụ na ndekọ ndekọ na iji (na Ndenye Add button). Ma ọ bụ jiri (Add to Salesforce button) kọwaa kpọmkwem otu ị chọrọ ka email metụtara na Salesforce, ọbụlagodi metụtara ozi ịntanetị na mpaghara omenala na ihe. Cannwere ike ịchekwa mgbakwunye mgbakwunye yana ozi ịntanetị gị gụnyere Akwụkwọ Google Drive. Cirrus Insight ga-esochi ma gosipụta ozi ịntanetị ị banye na Salesforce.
Mekọrịta kalenda gị Google & Salesforce - a gha emekorita ihe omume gi n’etiti Salesforce na Google, metutara ihe banyere ndi deere ya na Salesforce. Ọ bụghị naanị na ị nwere ndekọ nke nzukọ gị mana ha metụtara ndị ị kpọrọ ha.
Tinye Nduzi na Ndi ana-akpo na Salesforce - Cirrus Insight, na RingLead, na-eweta akpaaka email akara aka kọntaktị kpọọ na Gmail. Ka ị na-emepụta ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ kpọtụrụ na Cirrus Insight, ngwa ahụ ga-enyocha mbinye aka email na-akpaghị aka wee wepụ ozi kọntaktị iji bulie ụzọ mbu ma ọ bụ ụdị ịkpọtụrụ.
Mekọrịta Ndi ahia gi na Google Apps - mekọrịta kọntaktị site na Salesforce na kọntaktị Google na ngwaọrụ mkpanaka gị. Ndị ọrụ nwere ike ịkọwa ìgwè kọntaktị dị na Salesforce iji mekọrịta na Google. Ndi ana-akpo site na Salesforce ga ahazi dika otu ndi ikwuputara ma mee ka odi nfe ịhọrọ kọntaktị ichoro imekọ n’igwe.
Mepụta & Dezie Salesforce Records - mepụta ndekọ ọhụrụ na Salesforce ka ha na-abanye na igbe mbata gị. Ahịa ndị ahịa na-eme mgbe niile ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere ịlaghachi na imelite ndekọ mgbe e mesịrị. I nwekwara ike ijikwa Salesforce ozugbo site na Gmail site na idezi ederede dị ugbu a.
Mepụta usoro maka Salesforce site na Gmail - mepụta, dezie, jikwaa, bulie, na ọbụnadị ikpe dị nso na Gmail.
Tinye Ndi ana-akpo Google na Salesforce - chọpụta ma ndị kọntaktị Google gị nọ na Salesforce ma mepụta ndekọ ọhụụ na kọntaktị ọhụrụ na ibe Google Ndị ana-akpọ gị
Ngwakọta Ọrụ Salesforce - mepụta, dezie, nyefee, jikwaa, ma mezue ọrụ niile na-ahapụghị igbe mbata gị.
Mgbakwunye Ahịa Salesforce na Gmail - nweta ndebiri Salesforce gị, jikọta mpaghara, dezie ma zipụ ha site na Gmail.
Omenala bọtịnụ n'ime Gmail - nweta ma kpalite bọtịnụ omenala Salesforce na-ahapụghị igbe mbata gị. Nweta usoro na dọkụmentị ma na-ebute usoro iwu si na Gmail!
Mgbakọ na-efu maka oku na Gmail - Cirrus Insight, ya na UberConference, na-eweta ọkpụkpọ oku na-ahụ anya na nke efu site na Gmail. Malite oku nzụkọ na Cirrus Insight ga-agbakwunye ozi niile iji banye oku. Ihe ị ga - eme bụ ịzọpụta ya!
Tags: nghọta cirrusCRMGmailngwa ngwa googlemwekotandị ahịa
ActiveConversion: Chọpụta ma soro ndị ọbịa websaịtị
Apr 8, 2014 na 9: 05 AM
Daalụ maka isi Doug. Anyị ejirila Cirrus na FlexPAC ruo nwa oge ugbu a ma ọ nyerela aka ịnabata Salesforce nke ukwuu. Anyị enweghị ndị na-ahụ maka ọrụ ike na teknụzụ nke mere ụzọ ọ bụla iji mee ka Salesforce nweta ahụmịhe ma dịkwa mfe iji banye na arụmọrụ ha na-arụ bụ mgbakwunye maka anyị. Ebe ọ bụ na anyị anọghị na mbipụta ụlọ ọrụ nke Salesforce nwere Cirrus (yana Right On Interactive) enyekwara anyị ohere ịme ụfọdụ ihe mara mma n'ime nke anyị na-agaghị enwe ike mezu ma ọ bụghị.